ဝယ်ယူရေး/ကြေငြာများ | Community Driven Development Project | Page 3
၀ယ်ယူရေး/ကြေငြာများ	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအတွက် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူခြင်း ( Request for Quotation (RFQ) for the Supply of Helmets for Townships)
Download here; Request for Quotation (RFQ) for the supply of Helmets for Townships	Read More »
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူခြင်း (Request for Quotation (RFQ) for the Supply of Management Information System Server for Townships)
Download here; Request for Quotation for Manangement Information System Sever for Townships	Read More »
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအတွက် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူခြင်း -Request for Quotation (RFQ) for GSM Mobile (Handset)
Download here; Request for Quotation (RFQ) for GSM Mobile (Handset)	Read More »
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ အတွက် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း -Request for Quotation (RFQ) for G.9 300 Copies of MS Office
Download here for Request for Ruotation (RFQ) for G.9 300 Copies of MS office	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာစာ(Terms of Reference C4.17 KAYIN TERMS OF REFERENCE FOR TOWNSHIP LEVEL TECHNICAL ASSISTANCE)
National Community Driven Development Project Terms of Reference C4.17 Kayin Terms of Reference for Township Level Technical Assistance INTRODUCTION The Republic of the Union of Myanmar has receivedagrant in the amount of US$80 million from the World Bank toward the cost of its National Community Driven Development Project which is being implemented by the Department of Rural ...	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာစာ(Section 7. Terms of Reference C4.14 Mon and Tanintharyi Terms of Reference for Township Level Technical Assistance)
Section 7. Terms of Reference C4.14 Mon and Tanintharyi Terms of Reference for Township Level Technical Assistance INTRODUCTION The Republic of the Union of Myanmar has receivedagrant in the amount of US$80 million from the World Bank toward the cost of its National Community Driven Development Project which is being implemented by the Department of ...	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာ(REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST-Township Level Technical Assistance)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (Department of Rural Development) National Community Driven Development Project (IDA Grant H814-MM) Assignment Title: Township Level Technical Assistance Ref No. Township Clusters (TC) by Region/State No of townships per cluster, beginning in October 2015 Potential expansion into additional townships in subsequent years up toatotal of ...	Read More »
အလုပ်ကြော်ငြာ – Translator/Interpreter, Office Secretary and Procurement Assistant
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန (ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း National Community Driven Development Project – NCDDP ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါရာထူးများအတွက် ပြည်တွင်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် / ဝန်ထမ်းများ ငှားရမ်းလိုပါသည်− (၁) Translator/Interpreter (၂၄)လ ကျား/မ(၁)ဦး (၂) Office Secretary (၂၄)လ ...	Read More »
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST – Township Level Technical Assistance
April 7, 2015	Comments Off on REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST – Township Level Technical Assistance
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (Department of Rural Development) National Community Driven Development Project (IDA Grant H814-MM) Assignment Title: Township Level Technical Assistance The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank to implement the National Community Driven Development Project (NCDD) under the Department of Rural Development (DRD) ...	Read More »
ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း [8” အရွယ်Tablets (၃၀၀) လုံး]
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော 8” အရွယ်Tablets (၃၀၀) လုံး အားကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဈေးပြိုင် ဝယ်ယူရေးစနစ် (Shopping System) ဖြင့် ဝယ်ယူလို၍ လုပ်ငန်းရှင်များ ထံမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ(Quotation) တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာစတင်ဖိတ်ခေါ်သည့်နေ့ – ၂၂.၁.၂၀၁၅ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာပိတ်မည့်ရက် – ၅. ၂.၂၀၁၅ (မွန်းလွှဲ၁၂:၃၀) ၂။ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် လာရောက်မေးမြန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးကျော်စွာအောင် (0943434333)ထံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ တင်သွင်းရမည့် အဆိုပြုလွှာပုံစံများအား ဤနေရာမှ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရေးကော်မတီ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန	Read More »
Page3of 4«1234	»	Project Overview